အပင်ကြီးထွားမှုမီးခွက်များသည်အများအားဖြင့်အလင်းရောင်ရင်းမြစ်များဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်လျှပ်စစ်အလင်းရင်းမြစ်များ - အပင်များကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး photosynthesis အတွက်သင့်လျော်သော electromagnetic spectrum ကိုထုတ်လွှတ်သည်။ စက်ရုံမီးများသည်သဘာဝအလင်းမရှိသောသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်အလင်းမလိုအပ်သောအသုံးချခြင်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာ...
LED စက်ရုံအလင်း၏ function ကိုနှင့်နိယာမ
LED အပင်ကြီးထွားမှုမီးလုံးကိုအပင်ကြီးထွားမှုဥပဒေနှင့်အညီပြုလုပ်ထားပြီးနေရောင်ခြည်စွမ်းအားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းကိုစက်ရုံ၏ကျယ်ပြန့်သောရောင်ခြည်ဖြင့်တီထွင်ခဲ့ပြီးကျယ်ပြန့်သောဓါတ်ရောင်ခြည်ရှိပြီး watt per LM ၁၀၀ သို့ရောက်ရှိပြီးအစိမ်းရောင်အလင်းရောင်လိုအပ်ချက်များကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဘို့...
အဆိုပါ LED စက်ရုံတိုးတက်မှုနှုန်းဆီမီးခွက်တစ်ခုအပင်အလင်း photosynthesis များအတွက်လိုအပ်သောအလင်းရောင်အခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီရန်တောက်ပခန္ဓာကိုယ်အဖြစ် LED ကိုအသုံးပြုသည်အတုအလင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအစားအလိုက်ခွဲခြားထားသည့်အပင်သည်တတိယမျိုးဆက်ဖြည့်စွက်မီး၏အလင်းဖြစ်သည်။ နေ့အလင်းရောင်ကင်းမဲ့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဤမီးခွက်သည်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
LED အပင်ကြီးထွားမှုမီးအိမ်သည်အပင်၏အလင်းရောင်အခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီရန်အလင်းရောင်ရှိသောခန္ဓာကိုယ်အဖြစ် LED (light emitting diode) ကိုအသုံးပြုသောအတုအလင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ အမျိုးအစားအရ၎င်းစက်ရုံသည်တတိယမျိုးဆက်ထပ်ဆောင်းမီးခွက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ To နေရောင်ခြည်မရရှိခြင်းတွင်, t ...
လူတိုင်းသည်သူတို့၏အိမ်များတွင်အပင်အချို့ကိုစိုက်ပျိုးကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏အားလပ်ချိန်များတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကစားနိုင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှပနိုင်သည်။ သို့သော်လူတိုင်းတွင်အပင်များကိုဂရုစိုက်ရန်အချိန်နှင့်ခွန်အားမရှိပါ။ အပင်မီးများအတွက်နောက်ဆက်တွဲအလင်း LED စက်ရုံမီးလုံးသည်လှိုင်းအလျား၏တိကျသောရောင်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
LED စက်ရုံကြီးထွားမှုအလင်းအိမ်သည်ဖန်လုံအိမ်စိုက်ပျိုးသူများအားသီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးစေခြင်း၊ သီးနှံအရည်အသွေးတိုးတက်စေခြင်းနှင့် LED စက်ရုံကြီးထွားမှုအလင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်နေ့စဉ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်လက်ရှိဖန်လုံအိမ်အလင်းရောင်စနစ်ကိုအစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျဖိအားမြင့်ဆိုဒီယမ်မီးခွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက LED li ...
နမူနာအမှန်တကယ် LED စက်ရုံအလင်းမြင့်မားသောထိရောက်မှုယူနီဖောင်းအလင်းရောင်စက်ရုံ?
1, LED အပင်အလင်းပုလဲဖြန့်ဖြူး LED အပင်အလင်းအတွက် Irradiated အပင်အလင်း, ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုသဘာဝအပင်ကြီးထွားမှုအတွက်အလင်းရောင်အတွက်စံပြအခြေအနေ, သီးနှံစိုက်ပျိုးဘို့အကောင်းဆုံး, သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်အလိုရှိသော, Self- သီးနှံ Nomomori မျှမျှတတကြီးထွားမှု, LED အပင်အလင်း Koreho နံပါတ် Ito Noh, Hitoshi Hitoshi ...
အပင်ကြီးထွားမှုအတွက်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်မျိုး LED LED အလင်းသည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သနည်း။
အပင်ကြီးထွားမှုအတွက်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်မျိုး LED LED အလင်းသည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သနည်း။ LED plant light ၏လှိုင်းအလျားသည်အပင်ကြီးထွားမှု၊ ယေဘုယျအားဖြင့်မိုးလုံလေလုံအပင်များနှင့်ပန်းများသည်အချိန်နှင့်အမျှ ပိုမို၍ ဆိုးရွားလာမည်။ အဓိကအကြောင်းပြချက်မှာအလင်းရောင်မကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ...
LED စက်ရုံအလင်း၏အပူလွန်ကျူးနည်းလမ်းကဘာလဲ? လျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်အားလုံးကဲ့သို့ LED စက်ရုံအလင်းများသည်အသုံးပြုစဉ်အတွင်းအပူထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အပူချိန်တိုးလာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အပူလွန်ကဲမှုပြignနာကိုလျစ်လျူရှုပါက LED p ၏သက်တမ်းကိုသာထိခိုက်လိမ့်မည်။
LED မီးအလင်း၏သက်တမ်းကိုမည်သို့သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်？ ၁။ LED plant light တပ်ဆင်ခြင်း။ ၎င်းသည်ပထမဆုံးတပ်ဆင်မှုဖြစ်ဖြစ်ထပ်ခါတလဲလဲတပ်ဆင်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်တပ်ဆင်ခြင်းအဆင့်ကိုပြီးပြည့်စုံစေရန်မီးညွန်းချက်လမ်းညွှန်တွင်ထည့်သွင်းထားသောအဆင့်များကိုလိုက်နာရမည်။ တပ်ဆင်ခြင်းအခြေအနေကိုရွေးချယ်ရမည်။